नेकपाले सांगठनिक एकीकरणको काम बिहीबार टुंगो लगाउने, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेकपाले सांगठनिक एकीकरणको काम बिहीबार टुंगो लगाउने
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सांगठनिक एकीकरणको कामलाई बिहीबार टुंगो लगाउने भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सांगठनिक एकीकरणको सम्बन्धी विषयलाई बिहीबार टुंगो लगाउने गरी सहमति जुटाएको हो।
पार्टीको विधान अनुसार भदौ ५ गते भित्र संगठन एकीकरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको नेकपाले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको हो। यसअघि नै नेकपाले भदौ ५ गते भित्र संगठनको एकीकरणको काम सम्मन्न गर्ने गरी आन्तरिक सर्कुलर समेत जारी गरिसकिएको छ। त्यसैगरी मुलुकको समग्र राजनीतिक विषयबारे खुल्ला ढंगले छलफल गर्नका लागि स्थायी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा पनि बिहीबारको बैठकले निर्णय गर्ने बताइएको छ।
बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारे सचिवालय सदस्यलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। अध्यक्ष ओलीले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक स्थितिबारे अवगत गराएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिरहेको पहल र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलगायत विकासका काममा थप सहकार्यका विषयमा अवगत गराएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।सचिवालयको दुई साताअघिको बैठकमा नेता श्रेष्ठले चिकित्सक डा गोविन्द केसीको अनशनका विषयमा नेतृत्वसँगको असन्तुष्टिका कारण प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएको बाहिर आए पनि त्यसबारे कार्यसूची बनाएर छलफल नभएको बुझिएको छ।